Iindaba kwi-Swedish ukusuka Sweden - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Mhlekazi listeners, visitors zethu site kwi-Intanethi kwaye amaqela ku Facebook IEnkosi zonke kuba ingqalelo yakho, kuba izimvo, kuba umsebenzi wakho kwaye intsebenziswano. Namhlanje Kweyokwindla kunyaka sithi goodbye kuwe emva phantse iminyaka engama-yosasazo. Njengoko uyazi, isiswedish radio ithathe a ezibuhlungu kuthi kwaye kuba baninzi Kuni, bethu listeners, abafundi, isigqibo ukuvala yosasazo, oko kukuthi yosasazo ukusuka Sweden ukuba iinqwelo amazwe kwaye, ngokufanelekileyo, vala ezimbini imihla iinguqulelo, nto leyo yosasazo, nangona asebenzise i-Intanethi baba: isijamani kwaye Swedish. Mar iminyaka yethu editorial iqela uthi goodbye ukuba ababukeli bomdlalo bangene."Abancinane goodbye"xa iyatshintsha radio kwi-Intanethi yosasazo sele.
Yethu yokugqibela zeentsuku ka Matshi wonyaka
Ngoko ke, kwakukho ezintandathu kuthi, isiswedish edition zenza inxenye Radio Sweden - news kwi-isibhozo iilwimi, awathi, ngokulandelelanayo, kuyinxalenye isiswedish yosasazo Corporation kanomathotholo (abbr.). Financed, njengazo zonke imirhumo ye-TV, bamele kufuneka ahlawule bonke abahlali ukuze usebenzise i-TV ye-ukubukela i-TV. Zonke isiswedish radio nonomathotholo Sweden kokuthile, ie, uluntu inkonzo yosasazo, non-abarhwebayo radio, apho izibhengezo ngu prohibited. Asingawo kwi indawo ukuba mhlawumbi omnye conflicting amaqela, kodwa olubuyiselweyo ezikhoyo kwi-Sweden i-izimvo kwaye opinions. Iindaba malunga Sweden kwaye Sweden ngu intended ngokukodwa kuba isiswedish ababukeli bomdlalo bangene, ngaphandle Sweden. I-Swedish edition ivaliwe APR. Funda okungakumbi malunga closure ye-Swedish edition lukhona apha:.
무료 데이트 사이트입니다. 완전히 무료로에서 이탈리아에서 온라인 데이트
Chatroulette engeminye ividiyo ukuncokola nge-girls Dating site kuba ezinzima ividiyo incoko erotic ividiyo fun kuba abantwana ividiyo unxibelelwano intshayelelo i-intanethi ividiyo ukuncokola nge-girls elungele ngesondo engenayo Dating zephondo ividiyo incoko free